Carrots "Samsịn": nkọwa na njirimara nke ụdị dị iche iche, atụmatụ nsị, nyocha, foto - Karọt iche - 2019
Carrots "Samson" ọ bụ ọrụ nke ndị na-azụlite Dutch bụ ndị jisiri ike nweta ezigbo ihe ọkụkụ n'oge mgbọrọgwụ. Site na Ome ruo ntozu uzuzu nke carrots, ihe dị ka 110-120 gafee, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-akọ ubi na-ewe ihe ubi ha tupu oge a. E tinyere osisi ahụ na State Register nke Central Region na 2001.
"Samsịn" bụ ụdị ụdị Nantes. Ọ nwere rosette na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Akpọrọgwụ osisi na-acha ọkụ na nke a na-atụgharị na ya dị iche iche site n'ogo buru ibu (n'ogologo 25 cm n'ogologo), nke dị nro na ntakịrị ntụsara aka. Ụcha dị ka ọtụtụ ndị ọzọ - na-acha ọcha oroma. Isi nke karọt ahụ na-adịkarị ala, onye ọkpụkpọ ahụ nwere ike ịdị ma dị elu. N'ime "Samsịn" obere obere oroma, nke jikọtara ya na pulp.
Ị ma? A na-edozi carrots ma ọ bụ na-edozi ya site na ụzọ ndị ọzọ dị mfe karị, n'ihi na ngwa ngwa mgbe usoro usoro nke antioxidants dị na ya ruru 34%.
Okpokoro chara achacha ga-adị n'elu ala, na-eru otu 125-150 g n'ogologo 16-30 cm. Ihe kachasị dị elu nwere ike igosi ọbụna 200 g.
N'ihe dị nhata, site na 1 m² nke ihe ọkụkụ, ọ ga-ekwe omume ịnakọta ihe dị ka 5-8 n'arọ nke okpukpu kporo na chara acha, nke mkpụrụ ya dị elu nke 528-762 c / ha, nke dị elu karịa nke ndị ọzọ a maara nke ọma "Nantes-4". Mgbe ọpụpụ, ngwaahịa ahịa sitere na 91% ruo 94%.
Di iche iche di iche iche na-ekwalite onodu ndi ozo di iche iche, n'etiti nke bu nkpuru nkpuru germination (nke ruru 80% na mkpuru osisi nke 3 × 15 cm) na ntughari ntu oyi nke seedlings, obuna mgbe o di elu -4 ° C.
Mkpụrụ nke dịgasị iche iche carrots na-emepụta ihe n'ime izu ole na ole mgbe ọ kụsịrị, ọ bụ ezie na ndị mbụ ga-ahụ anya mgbe ụbọchị 7 gasịrị. N'oge a, a na-atụ aro ka ị mepụta ihe mbụ.
Ọ dị mkpa! Mgbe Samson na-eto eto dịgasị iche iche, mgbọrọgwụ ma ọ bụ mgbakwasị ụkwụ na-adịkarị obere, ọnụ ọgụgụ ha na-ejikarị emeghị ihe karịrị pasent 5 nke nchịkọta zuru ezu.
N'ihe banyere ụdị dịgasị iche iche ọ dị mfe iji chọpụta uru ya, ebe ọ bụ na ha na-ahụ nke ọma n'ihu ndị na-amalite ya n'ubi. Nke mbụ, ọ dị mma ịkọtara àgwà ndị a dị mma:
akwa germination, n'ihi ụzọ ndị dị elu iji nweta mkpụrụ ma zere ihe onwunwe na ihe a na-atụghị anya ya na oge (na-abụkarị, ọ bụrụ na karọt adịghị etolite, ị ghaghachị ya);
ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu mkpụrụ osisi niile na-eto eto, na-enye ha ezigbo ihe ngosi (ọ dị mkpa karịsịa maka ndị na-eto eto okpomọkụ na-eto eto maka nzube azụmahịa);
n 'oge owuwe ihe ubin'agbanyeghị mpaghara ebe a na-akọ ihe ọkụkụ na ihe ndị dị na ọnọdụ ihu igwe;
ezi nkwụsi ike maka ọrịa nkịtị nke ezinụlọ nche anwụ;
ole na ole akwụkwọ nri na-adịghị mma (ndị dara ogbenye, ma ọ bụ mebie emebi);
nchekwa nchekwa dị mma, karịsịa ịtụle nkezi oge ripening nke carrots (mgbọrọgwụ adịghị ida ha ngosi na-ejigide ha uto Njirimara ruo mmiri).
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ị kpebisiri ike ịnọgide na-ewe ihe ubi ruo afọ ọzọ, tinye carrots na nnukwu jute akpa. N'etiti agbada nke mkpuru ahihia kwesiri ibido ala akpo yab. Ejiri akpa juputara na agbada ma gbadaa n'ime ala akọrọ, nke na-esighi na-egbuke egbuke n'oge oyi.
N'adịghị ka ọtụtụ carrots ọzọ, mgbọrọgwụ "Samsịn" adịghị ebili n'elu elu, na oge niile ha nọ n'ala na oghere. Ekele maka ihe a, okpueze ha bụ mmanụ ala mgbe niile, ọ dịghịkwa agbanwe agbanwe.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwurịta banyere adịghị ike, mgbe ahụ, ihe niile a pụrụ ịmata bụ ihe isi ike nke ịzụta mkpụrụ na ụlọ ahịa dị nta na ọnụ ahịa ha dị oke ọnụ, ọ bụ ezie na ị nwere ike idozi nsogbu a site n'ịkpọtụrụ ụlọ ahịa na-ezigara ndị na-ezitere ha ozi ha.
Dị ka ndị na-emepụta ihe na dịka nyocha nke ọtụtụ ndị na-elekọta ubi, karọt kacha mma "Samsịn" ga-amụ na ala ndị a na-asọpụ, nke dị iche iche ma ọ bụ ájá ájá. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-emepụta mkpụrụ dị iche iche na etiti afọ, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ụfọdụ, ọ ga-abụ ihe kwesịrị ekwesị na-akụ tupu oyi, na mmalite nke November, mgbe ọ dịlarị oyi n'èzí ma okpomọkụ dị elu +5 Celsius.
Otu n'ime ihe oriri nke carrots kwesịrị igosi na ebubo karọt, nematodes, wireworms, Medvedka, ntụpọ ojii, aphids.
N'ikpeazụ, a na-ekwe ka ịgha mkpụrụ n'ime obere olulu mmiri, na-atụgharị mkpụrụ na nchịkọta ọka ma ọ bụ site na humus (akuku ihe dị ka cm cm nwere mmụba nke 20 cm). Ọ dịghị mkpa iji mee ka ala sie ike, ọ bụ iji kọmpat na mulch ntakịrị nke mere na eriri adịghị apụta.
N'iburu eziokwu ahụ na mkpụrụ osisi Dutch bụ nke mkpụrụ germination na-arịwanye elu, ọ dị ha mkpa ka a ghara ịkụpụta ya ugboro ugboro karịa mgbe niile. Ntughari mkpụrụ na ntanetị, n'ụzọ mmiri, tinyere ájá ma ọ bụ osisi n'ụdị mgbochi, ga-arụ ọrụ nke ọma.
Ọ bụrụ na ị na-eme ka mkpụrụ osisi na-eto eto, mgbe ahụ, ọ ga-adị mkpa ka ọ bụrụ na ọ ga-abụ na ọ ga-abụ ihe dịka 5-7 cm, ma ọ bụghị mkpụrụ osisi ahụ ga-abụ ntụpọ na elongated. Ugbochi weeding ga-enyere aka iwelie isi nke mgbọrọgwụ kụrụ. Maka ezi ọganihu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ karọt, ọ dị mkpa ịnweta nri a na-eri n'oge oge na-eto eto, Samsịn dịkwagasị iche iche abụghị otu n'ime okwu a. Nke a pụtara na ọ bụrụ na ị na-edozi mmiri ma na-eme ka fertilizing kwesịrị ịdị na-eme ya mgbe nile, ọ bụrụ na ọ ga-eme ka mmiri dịkwuo ogologo oge, ọ ga-ejikọta ya na ihe ọkụkụ, ahịhịa na ahịhịa.
Ilekọta "Samsịn" dịgasị iche iche na-agụnye otu ihe ahụ dị ka ịmepụta ụgbọ ala ọzọ ọ bụla, ihe ndị bụ isi nke usoro a ga-abụ ịgbara mmiri na oge kwesịrị ekwesị.
Ị ma? Na mgbakwunye na uru ndị ọzọ, carrots nwekwara ụdị ọgwụgwọ ụfọdụ, ebe ọ bụ na ha nwere ike iweli ọkwa calcium n'ime ọbara mmadụ, n'otu oge ahụ belata ọnụ ọgụgụ cholesterol. Ọ bụ ya mere ndị dọkịta ji ekwenye na-eri ya maka ọrịa na-ebute ọrịa na ọrịa nke usoro obi.
Mkpụrụ osisi buru ibu, bụ nke a kọwara dịgasị iche iche, nwere mmasị na mmiri, nke pụtara na ịgbara mmiri kwesịrị ịdị na-eme mgbe niile. Ke adianade do, iji zere ọdịdị nke eriri n'elu, mgbe ọ bụla nke mmiri mmiri, ala n'etiti ahịrị ga-agbahapụ.
N'ikpuru, a na-eme ka mmiri na-edozi ụbọchị ọ bụla, na n'oge oge nrubeisi - kwa ụbọchị. N'izu abụọ ma ọ bụ izu atọ tupu a kụọ ihe ndị a na-egbute, a ga-akwụsị kpam kpam mmiri mmiri, ma ọ bụghị na a ga-echekwa karọt ahụ ma ghara ịmalite ịgbawa.
N'etiti ọrịa ndị nwere ike ịnweta carrots kwesịrị ịkpachara anya na ire ere ojii, ire ere ntụ, powdery mildew, cercosporosis, rhizoctoniosis.
A na-atụ aro "Samsịn" dịgasị iche iche na-eri nri na ịnweta nri ịnweta nri, na-eme usoro a ugboro atọ ma ọ bụ ugboro anọ n'oge uto nke osisi ahụ.
A na-ebu nri mbụ na June ma na-agụnye iji ogige nitrogen, na ndị na-eso ya na-achọ ka ọnụnọ potash dị. Oge ikpeazụ a na-eme ka ala sie ike otu ọnwa tupu owuwe ihe ubi.
N'agbanyeghị eziokwu ahụ, na ọtụtụ ndị na-elekọta ubi, ndị na-emepụta ihe ọkụkụ na-eduga n'ịmịpụta ihe mgbọrọgwụ (karịsịa mgbe ọkụkọ ọkụkọ ma ọ bụ mullein na-abawanye n'ime ala), ụfọdụ ndị bi n'oge okpomọkụ na-eji ha eme ihe.
Dịka ọmụmaatụ, tụgharịrị na ntụpọ nke ọkụkọ 1: 15, a na-agbanye osisi na June na July. Ihe ziri ezi ma ọ bụ ihe ọjọọ - onye ọ bụla nke okpomọkụ nwere ike ikpebi n'onwe ya, ma echefula banyere oke na-eto eto na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, bụ nke a na-ahụkarị mgbe a na-ejikarị usoro okwu. N'otu oge ahụ, ihe ndị na-eme ka ịnweta mineral na-elekwasị anya na mmepe nke usoro mgbọrọgwụ, ma n'ọnọdụ a mgbọrọgwụ.
O siri ike ịchọta onye na-ebi ndụ n'oge okpomọkụ, bụ onye, ​​mgbe ọ na-eto eto dị iche iche, agaghị enwe obi ụtọ na njedebe na njedebe, n'ezie, ọ bụrụ na a kụrụ ihe na nlekọta dịka iwu niile si dị. Ihe dika ndi oru ugbo na ndi oru ugbo jikota n'otu nyocha ha di mma banyere okwu a, na-achoputa onodu ahia nke ugbo ahihia, uru ha na uto di nma.
Ihe eji eme ihe dika ndi na-eme ihe ndi ozo, ihe ndi ozo di iche iche na ihe ndi ozo di iche iche, ma n'ihi ohere nke nchekwa na oge ozo, i nwere ike iji ya maka otutu afo.
Dịka ị pụrụ ịhụ, nkọwa na njirimara nke karọt "Samsịn" bụ ezigbo ihe kpatara ị ga-eji gbalịa ịmalite akwukwo akwukwo akwukwo nri n'ubi nke onwe gi, na mgbe na otu esi eme ya, ị mụtara.
Anyị na-eme nri maka ọbọ anụ ọhịa
Iwere rabbits na ọnọdụ dị iche iche: otu esi eji aka gị eme ọnyà
Ezi akuku akwụkwọ nri tupu oyi
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Carrots "Samson": nkọwa, ịkụ na nlekọta